आज पनि नेपाली बजारमा सुनको मुल्यले अर्को नयाँ रकेर्ड कायम गरेको छ । आज सुनको मुल्य तोलामा १३ सय रुपैयाँले बढेर हालसम्म नयाँ विन्दुमा पुगेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आजका लागि सुनको मुल्य प्रतितोला ९५ हजार ८ सयमा पुगेको छ । जुन मुल्य हालसम्म कै उच्च हो ।
बिहीबार बसेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पदाधिकारी बैठकले आगामी २६ र २७ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । महासंघको निर्वाचन सारिएको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार चन्द्र ढकाल समूहका उद्योगी–व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका अर्का उम्मेद्वार किशोर प्रधान पक्षका उम्मेद्वारहरुले पराजय हुने डरले निर्वाचन सारेको ढकाल पक्षको आरोप छ ।
भोटेकोसी र बाह्रबिसेका बाढी पहिरो पीडितलाई नेपाल तरुण दल सिन्धुपाल्चोकले खाद्यान्न र नगद राहत वितरण गरेको छ । कोदारी र फुल्पिङमा रहेका एक सय पीडितलाई सय बोरा चामल, ७४ थान त्रिपाल र पहिरोमा परेर मृत्यु भएका परिवारलाई नगद ३० हजार राहत प्रदान गरिएको तरुण दल सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ ।
भारतमा नयाँ कोरोना संक्रमितको संख्याले उच्च रेकर्ड कायम गरेको छ । भारतमा पछिल्लो २४ घण्टाभित्र ४८ हजार ४४६ जनामा नयाँ कोरोना संक्रमण भएको पाइएको छ । जुन २४ घण्टामा संक्रमित हालसम्मकै उच्च संख्या हो । यसअघि सम्म कुनैदिन यतिको संख्यामा संक्रमित फेला परेका थिएनन् । बुधबार पनि भारतमा ४५ हजार ५९९ जनामा नयाँ कोरोना संक्रमित फेला परेका थिए । भारत विश्वका धेरै कोरोना संक्रमित मुलुकहरुको तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।
देशमा बढिरहेको संकटबाट मुक्तिका लागि जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ५ वटा प्रस्ताव अघि सारेका छन् । लोकतान्त्रिक ढंगले संकटमोचन गर्न यसो गरौं,’ भट्टराईले सारेका पाँच प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘१. संसद अधिवेशन बोलाऊँ । २. केपी ओलीलाई विदा गरेर नेकपाभित्रैबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरौं । ३. अपराधका संरक्षक न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाऊँ । ४. भ्रष्टाचार रोक्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गरौं । ५. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाऊँ ।’
मठ-मन्दिर भौतिक दूरी कायम गरी खोल्ने व्यवस्था मिलाउन विश्व हिन्दू महासङ्घले सरकारसँग माग गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी र महासचिव गणेशप्रसाद न्यौपानेले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्य सबै क्षेत्र खुलेकाले पूजाआजा एवं दर्शनले अशुभ मार्गबाट शुभ मार्गमा जान प्रेरित गर्ने आस्थाको केन्द्र मठ मन्दिर पनि खोल्न माग गरेका हुन्।
रुसमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरसका पाँच हजार ८११ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । क्राइसिस रेस्पोन्स सेन्टरले दिएको जानकारी अनुसार रुसमा कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० बाट संक्रमित हुनेको संख्या आठ लाख ८४९ पुगेको छ । त्यस्तै रुसमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि १३ हजार नाघेको छ । अहिलेसम्म रुसमा १३ हजार ४६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्र रुसमा कोरोना भाइरसका कारण १५४ जनाको मृत्यु भएको हो ।
पर्सामा कोरोनाका संक्रमित बढ्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनले वीरगन्ज महानगरपालिकामा शनिबारदेखि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरेको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले वीरगन्ज महानगरपालिकामा शनिबारदेखि अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय भएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।
वायुसेवा सञ्चालक संघले तत्काल आन्तरिक उडान खोल्न माग गरेको छ। बाढीपहिरोका कारण सडक यातायात कष्टकर रहेको बताउँदै विकल्पका लागि तत्काल आन्तरिक उडान सुचारु गराउन संघले माग गरेको हो। हाल नेपालमा बाढीपहिरोका कारण प्रायः सबै राजमार्ग तथा लोकमार्गका बाटो क्षतिग्रस्त भएको अवस्था छ।
शुक्रबार नेपालमा थप १ सय ३३ जनामा कोरोना संक्रमित थपिएका छन । ३ हजार ९ सय ८७ जनाको परीक्षण गर्दा १ सय ३३ जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी १०७ जना निको भइ घर फिर्ता भएका छन । यो सँगै निको हुनेको संख्या १२ हजार ९ सय ४७ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए ।